Inguquko yenzeke ku-Nail Wraps - Izindaba - i-Shanghai HUIZI digital
Inguquko yenzeke ku-Nail Wraps
Isikhathi: 2021-05-28 Ukushaya: 5307
Izitika ze-3D Nail Art
Iphethini ikakhulukazi izimbali novemvane oluncane. Kudinga ukusetshenziswa nge-nail polish.
Izithako azaziwa futhi ziqukethe amapulasitiki anobuthi.
Kushibhile. Kepha i-viscosity ngokuvamile ayisihle neze,It iyaxebuka kalula.
Ukugcwaliswa kwephethini kuphansi.
Udinga ukuncika kubuchwepheshe be-manicurist, futhi imvamisa umphumela awumuhle njengoba bekulindelwe.
Kufana kakhulu nesitika se-tattoo, kudingeka uqaphele kakhulu, kube lula ukwenziwa k isitikha sihlukaniswe.
Okokuqala, sidinga ukungena emanzini, bese sikhipha isitika, sisinamathisele ngophuthu, sihlikihle kancane ngeminwe yakho, bese sinamathela ingxenye esobala yesitika esipikili, bese sidonsa kancane khipha iphepha elimhlophe ezansi. Ngasikhathi sinye, yiphathe kahle ithawula elihlanzekile. Suck up amanzi amaningi ngokweqile.
Ngemuva kokukhishwa kwamanzi amaningi, faka uphawu lwe-nail polish kubhulashi le-nail ukwenza isitikha sinamathele kunzipho.
Inqubo enjalo ethatha isikhathi futhi eyinkimbinkimbi isusiwe ngoba ayilandeli ijubane labantu lokuphila.
Imichilo / ukusonga kwe-Nail polish
Izipikili ze-Nail Polish, njengoba igama liphakamisa ukuthi yi-nail polish ne-nail polish nail paste. Uma kuqhathaniswa ne-manicure manicure eyenziwe nge-nail polish nepulasitiki, umkhiqizo awenzanga nje kuphela impumelelo ekwakhiweni nakubuchwepheshe, kepha futhi uthuthukise ukusebenziseka nokuphepha kwe-manicure, futhi ungumkhiqizo omusha embonini yanamuhla yezipikili.
IShanghai Huizi Cosmetics Company izalwe yasungula ilabhorethri yocwaningo ngomuthi ngo-2010. Sinamalungelo empahla yobuhlakani abazimele kulo mkhakha, sigxile ocwaningweni lwezandla, ukuklama, i-ODM ne-OEM eminyakeni engaphezu kwengu-11. Imikhiqizo yoqobo ifaka isitikha sezipikili, isitikha sezinzipho, isitikha sezinzipho zezingane, neminye imikhiqizo esekelayo ye-manicure.
2013-2015, Sine-4000 metres square cosmetics production cosmization center, ukwethulwa komshini wokuphrinta we-4-color waseJalimane, umshini wokuphrinta wesikrini wase-Taiwan othomathikhi, umshini wokugaya othomathikhi nowokuzisika waseTaiwan, imishini yokulinganisa yaseJapan.
Le nkampani isidlulile isitifiketi sohlelo lokuzibophezela kwezenhlalo se-BSCI, isitifiketi sohlelo lwekhwalithi ye-ISO9001, imikhiqizo idlulise isitifiketi se-SGS, isitifiketi se-FDA, futhi ihambisana ne-United States kanye nezindinganiso zezimonyo zomhlaba jikelele ze-European Union.
Okwamanje sikhonza amakhasimende emazweni angaphezu kwama-40, njengeJapan, i-United States, i-Italy, iFrance, iJalimane, iSouth Korea njalonjalo. Umthamo wokulethwa komhlaba, noma ngabe uvelaphi, ungawujabulela.
Isitika se-gel nail polish
Kusukela 2018, sincike ekuzweleni okuphezulu kakhulu nasobuchwepheshe kunkambu yobuhle be-nail, saqala ukunikela ngesitikha se-gel nail polish, esibizwa nangokuthi Isitika se-gel esiphulukisiwe se-gel.
Ngemuva kwemizamo yeminyaka yonke, NgoSepthemba 2019. Uchungechunge lwe-NG woza emakethe.
Ngokuthungwa kwayo okuthuthukile okuhlukile kanye ne-gloss, abalandeli abaningi bezobuciko be-nail bayahlanya ngakho uma befaka izipikili, futhi unikezwe i- amaphuzu aphezulu kakhulu.
Akuhlanganisi kuphela ukucwebezela nekhwalithi ye-nail polish, kepha futhi ingasebenza ngesikhathi esifushane, isuse ngendlela elula.
Ukuqinisekisa ukuthi izithako ziphephile futhi azinabo ubuthi, ngasikhathi sinye, siphinde sizame konke okusemandleni ukuvikela ubuso bezinzipho zabo bonke abathengi , sisebenzisa i-degree yezokwelapha i-glue kusendlalelo esingaphansi. Ngendlela, bobabili abananesihluku futhi bayi-vegan.
Okwedlule: Ungaqala kanjani ibhizinisi lakho le-nail?
Okulandelayo: Izinsizakalo ze-HUIZI-UKUQESHWA KWEZINCOMO